Nevion ၂၀၁၉ ၏အောင်မြင်သောပထမတစ်ဝက်ကိုကျင်းပ | NAB သတင်းများ | 2019 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Nevion 2019 ၏အောင်မြင်သောပထမဦးစွာတစ်ဝက်ပွဲပြုလုပ်
Nevion 2019 ၏အောင်မြင်သောပထမဦးစွာတစ်ဝက်ပွဲပြုလုပ်
Nevionvirtualized မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏, ဆုရ provider က, ကအတော်ကြာသိသိသာသာမြင့်မားပရိုဖိုင်းကိုအပေးအယူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အတွက်တစ်နှစ်တစ်အောင်မြင်သောပထမနှစ်ဝက်ကျင်းပနေသည် NOK 200 သန်း (အမေရိကန် $ 23 သန်း) ထက်ပိုတဲ့စံချိန်အမိန့်စားသုံးမှုအောင်မြင်နှင့်ခဲ့ အောင်မြင်စွာ JT-မိုင်အဘို့စမ်းသပ်ဖို့က၎င်း၏အမျိုးအစားထဲတွင်အနည်းငယ်ထဲကတစ်ခု SMPTE ST 2110 စံ။ နောက်ထပ်ခိုင်မြဲ Nevion'' s ကိုတစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, Geir Bryn-Jensen, အဖြစ်ရာအရပျ (အသံလွှင့် & မီဒီယာနည်းပညာပေးသွင်းများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံးမှခန့်အပ်ထားသောထားပြီးIABM) အဖွဲ့ဝင်များ '' ဘုတ်အဖွဲ့။
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ရောင်းအားထက်ပိုမို 20 နှစ်ပေါင်း '' အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ
Geir Bryn-Jensen, CEO ဖြစ်သူ Nevion
တယ်လီကွန်အတွင်းမှာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အိုင်တီ Geir ၏အလုံးစုံစစ်ဆင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါလိမ့်မည်, ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်, industries IABM နှင့် setting ကို, ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အသင်းအဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒများပြောင်းလဲနေတဲ့။ အဆိုပါချိန်းကနေအသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ်ပြုမူ Nevion'' s ကိုရွယ်တူများနှင့်ပြိုင်ဘက်က၎င်း၏အနေအထားကို၏ Real-time သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် IP မီဒီယာကွန်ယက်ကိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူအဖြစ်, အပြောင်းအလဲနဲ့, စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်အချက်အလက်အချက်ပြမှုများ၏စီမံခန့်ခွဲမှု။
2019 ၏ပထမထက်ဝက်အဘို့ပျေါလှငျများထဲမှသောမကြာသေးမီကကြေငြာချက်ဖြစ်ပါတယ် Nevion သည် Sony Imaging Products & Solutions Inc နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ထူထောင်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။Sony က) ထုတ်လွှင့်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် IP ကို-based ဖြေရှင်းချက်၏ဧရိယာထဲမှာ။ ဖြည့်စွက်ကာ, Sony က ဒါကြောင့်တစ်ဦးဦးဆောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအောင်တဲ့ရှယ်ယာဝယ်ယူသဘောတူညီချက်ကနေတဆင့်ကုမ္ပဏီအတွက်လူနည်းစုရှယ်ယာဝယ်ယူထားပြီး Nevion.
မှုအတွက်ပထမမှာတော့ Nevion, NAB ပြပွဲ 2019 က Rede Amazônicaနဲ့သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးကိုမြင်လျှင်, Rede Amazônicaက၎င်း၏အခြေခံအဆောက်အအုံသက်တမ်းတိုးဖို့နဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်လျော့ချကူညီရန်၎င်း၏အဆောက်အဦ၏နံပါတ်တစ်ခုက IP-based ဖြေရှင်းချက်ကိုကယ်နှုတ်သောဘရာဇီးရဲ့အကြီးဆုံးထုတ်လွှင့်တ။
As Nevion IBC မှ၎င်း၏အာရုံလှညျ့, အထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၎င်း၏ရပ်တည်မှုသူ့ရဲ့ flagship software ကို-သတ်မှတ်ထားသောမီဒီယာ node ကိုအားဖြင့်ခိုင်မာစေခဲ့သည် virtuoso အောင်မြင်စွာ SMPTE ST 2110 အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြရန်၎င်း၏အမျိုးအစားထဲတွင်အနည်းငယ်ထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းအမည်ရှိခံရ IP ကိုကျော်မီဒီယာများ၏အနှစ်သာရ-based သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်စံ။ ဤသည်စေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ကြောင်းထုတ်လွှင့်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ, ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်တခြားအလားအလာအသုံးပြုသူများကိုဆိုလိုတယ် Nevion virtuoso ထုတ်ကုန်တစ်ခု IP ကိုမီဒီယာကွန်ယက်တွင် multi-ရောင်းချသူပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ချပါနေကြသည်။
"ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိ 2019 များအတွက်ထူးချွန်ခဲ့ Nevionယင်းစံချိန်အရောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုနှစ်ပထမခြောက်လအတွင်းအောင်မြင်ပါပြီသိသိသာသာဖောက်သည်ကိုအနိုင်ပေးခြင်းဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြအဖြစ်, "Geir Bryn-Jensen, CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်, Nevion။ ကျွန်တော်သိသည်အတိုင်း ", အထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပေးသွင်းဖို့ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးကနေတပြင်လုံးကိုတနျဖိုးကွင်းဆက်ထိခိုက်ကြောင်းအခြေခံများနှင့်အလွန်နှောင့်အယှက်ပြောင်းလဲမှု, ခံယူခဲ့သည်။ ငါအခြေခံကျကျပြောင်းလဲငါ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးရန်မျှော်လင့် Nevion'' ့ကိုထောကျပံ့ဖို့ software ကို-သတ်မှတ်ဖြေရှင်းချက်တဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ခြင်းကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, IABM ယင်း၏အရေးကြီးသောမစ်ရှင်၌တည်၏။ "
virtualized မီဒီယာထုတ်လုပ်မှု၏ဗိသုကာအဖြစ်, Nevion ထုတ်လွှင့်, ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေး, အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှမီဒီယာကွန်ယက်နှင့်ထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ ပို. ပို. အိုင်ပီ, virtualization နှင့် Cloud နည်းပညာပေါ်တွင်အခြေခံ, Nevion'' s ကိုဖြေရှင်းချက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်အချက်အလက်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ enable - အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနဲ့လုံလုံခြုံခြုံ။ အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုကနေဖြန့်ဖြူးရန်, Nevion ဖြေရှင်းချက်အဓိကအားကစားနှင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များစွမ်းအင်အသုံးပြုကြသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမီဒီယာအဖွဲ့များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးအသုံးပြုမှု၏အချို့ Nevion AT & T ကအပါအဝင်နည်းပညာ, အား NBC Universal, Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စု Inc ကို, နာဆာ, Arqiva, BBC, CCTV, EBU, BT, TDF နှင့် Telefonica ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက www သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။nevion.com ။ လိုက်နာပါ Nevion တွစ်တာ @nevioncorp အပေါ်
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း စီအီးအို IABM NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB16 nabshow Nevion အောင်မြင်ခြင်း 2019-07-17
နောက်တစ်ခု: IDS ပလက်ဖောင်း၏ Densitron ကြေညာချက်များသိမ်းယူမှု